Fanontaniana & Valiny: Fantaro i Rany Phok, mpikatroka ho an’ny fiteny Krung · Global Voices teny Malagasy
Rany no hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 12-18 Aogositra 2020
Voadika ny 12 Aogositra 2020 3:25 GMT
Rany Phok, mpikatroka ho an'ny fiteny. Sary natolotry ny “This Life Cambodia”.
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Rany Phok (@Rany46284843) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy..
Rany Phok (RP): Ny taona 1991 aho no teraka tao amin'ny faritanin'i Ratanakiri, avaratra-atsinanan'i Kambodza. Tamin'ny alàlan'ny famokarana sarimihetsika, nandray anjara aho tamin'ny famantarana ireo olana ara-piarahamonina nitranga tao amin'ny vondrompiarahamonina misy ahy. Rehefa nahavita fiofànana iray momba ny famokarana sarimihetsika fanadihadiana, natolotry ny tetikasa Mitondra ny tenin'ireo vehivavy teratany sy ireo vondrona voahilikilika [Angl] tao amin'ny Bophana Audiovisual Resource Center, dia nanatontosa sarimihetsika fohy roa aho, ny iray tamin'ireo dia momba ny fanabeazana amin'ny fiteny Krung ao amin'ny faritanin'i Ratanakiri.
RP: Vofetra ny isan'ny votoaty amin'ny fiteny Krung (គ្រឹង, tononina ihany koa hoe Kreung) ao amin'ny aterineto, tafiditra anatin'io ny media sôsialy.
RP: Mandritra ilay herinandro hanentanana, horesahako ny fiainana andavanandron'ireo vahoaka Krung sy ny fampiasàna ny fitenin-dry zareo. Eny anivon'ireo andiantaranaka tanora amin'ny vahoaka Krung, betsaka no tsy miteny io fiteny io ary betsaka ny voanteny no miha-very. Araka izany, ny sarimihetsika fanadihadiana novokariko dia nikendry handrisika ireo tanora teratany mba hampiasa ny fiteny Krung sy hitahiry azy io.
RP: Olana goavana ny fahaverezan'ny fiteny satria raha toa verin'ireo vahoaka teratany ny fitenin-dry zareo; very koa ny maripamantarana an-dry zareo. Amin'ny alàlan'ny famokarana sarimihetsika, ezahako ny mampivoitra ireo olana any anatin'ireo vondrompiarahamonina teratany amin'ny ankapobeny sy mikatsaka izay mety ho vahaolana azo aroso. Raha fehezina, antenaiko ny hoe hozaraina erantany ny fiteny Krung mba ho ny tsirairay no ho afaka handre ny hakantony ary mba ho afaka hitahiry ny maripamantarana azy ireo vahoaka Krung.